Todoba Qof Oo Ku Dhintay Duqaymo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho | Berberanews.com
Home WARARKA Dibadda Todoba Qof Oo Ku Dhintay Duqaymo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Todoba Qof Oo Ku Dhintay Duqaymo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Muqdisho (Berberanews)- Ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay tiro ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen duqeymo iyo dagaalo goos-goos ah oo xalay ku dhexmaray Muqdisho ciidamada DKMG ah iyo AMISOM oo dhinac ah iyo xoogagga Al-Shabaab.
Iska-horimaadyo goos-goos ah oo ka horeeyay madaafiicda khasaaraha geystay ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyinka Hodan iyo Boondheere ee Waqooyiga iyo Koonfurta Muqdsiho, iyadoo markaas kaddib ay billowdeen duqeymo culus oo ku dhacayay degmooyin dhowr ah.
Degmooyinka ay duqeymuhu ka dhaceen waxa ka mid ah: Huriwaa, Yaaqshiid, Shibbis, Cabdicasiis, Kaaraan, Hodan iyo Howlwadaag, iyadoo madaafiicdaas ay dileen toddoba qof oo dhammaantood shacab ahaa.
Laba ka mid ah dadka dhintay ayuu madfac ku dilay degmada Hodan, halkaasoo uu dagaal muddo socday ku dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo xoogagga Al-shabaab.
Previous articleRagga Maamulka igula jira ee Gobolka Saaxil ka soo jeeda waxaan leeyahay Dhuumashada dhabarku muuqdo ha layska daayo oo waajibaadkiinna Qaranku idiin igmaday Qabsada intaad Shir-beeleedyada Abaabulaysaan..”
Next articleXukuumadda Somaliland oo faahfaahin ka bixisay Xeerka Hilibka dalka oo Golaha Wasiirradu dhawaan ansixiyey